गुमनाम सुष्मा कार्की अचेल के गर्दैछिन् ? – Todays Nepal
गुमनाम सुष्मा कार्की अचेल के गर्दैछिन् ?
आईटम गर्लको नामले परिचीत सुष्मा कार्की आजकल के गर्देछिन् यो चासोको विषय हुनसक्छ आम दर्शकमा कुनै समय सम्भावना बोकेकी चर्चित नायिका थिईन् सुष्मा कार्की ।चर्चामा आउन बोल्ड क्यारेक्टर र हट दृश्यलाई मात्र प्राथमीकता दिएको कारण राम्रो ब्यानरमा काम गर्दा गर्दै पनि उनको करीयर धरापमा पर्यो ।
बोल्ड छबी बनाउँदा बनाउँदै पनि उनलाई निर्माता निर्देशकहरुले पत्याएनन्। कुनै समय उनलाई प्रेमी फेर्दे हिड्ने नायिका भनेर पनि सिनेबृतमा चर्चा हुने गथ्र्यो । पछिल्लो सयम बिदेशको स्टेज कार्यक्रमहरुमा नै बढि व्यस्त हुने सुष्मालाई अहिले फिल्म पाउन कठिन नै भईरहेको छ । त्यसैले पनि यतिबेला सुस्मा फुर्सदिली छिन् ।
हालै “साली कसको भेनाको” चलचित्रको सुटिङ सकेर बसेकी सुस्माको दिन चर्या यतिबेला घुमघाम र सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडियो अपलोड गर्ने भएको छ । सलमानसँग फोटो खिचेर होस् या सामजिक सञ्जालमा डबम्यास र म्युजिकल भिडियो र लाईभमा रमाउँदै होस् दिनचर्या बिताईरहेकीछिन् ।
करिश्माकी छोरीले शिवका छोरासँग रोमान्स गर्ने : करिष्मा हट कि छोरी कविता ?
समुद्र शास्त्रअनुसार हत्केलामा यी ५ मध्ये १ चिन्ह छ भने भईनेछ भाग्यमानी!